Mpamatsy, Urea Granules Crusher, mpamatsy milina crusher mora vidy | YiZheng
Inona ilay masinina zezika zezika?
1. zezika Urea Crusher Makisoa mampiasa indrindra ny fikolokoloana sy ny fanapahana ny banga eo anelanelan'ny roller sy ny lovia concave.
2. Ny haben'ny fahazoan-dàlana dia mamaritra ny haavon'ny fanorotoroana materialy, ary ny hafainganam-pandehan'ny amponga sy ny savaivony dia azo ovaina.
3. Rehefa miditra amin'ny vatana ny urea dia mamely ny rindrin'ny vatana sy ny baffle ary vaky. Avy eo dia potipotehina izy io amin'ny alàlan'ny talantalana eo anelanelan'ny roller sy ny lovia concave.
4. Ny fahazavana ny takelaka misy concave dia azo ovaina amin'ny haben'ny fanorotoroana amin'ny alàlan'ny rafitra mifehy ao anatin'ny 3-12 mm, ary ny mpandrindra seranan-tsakafo dia afaka mifehy ny habetsaky ny famokarana.
Alohan'ny hampiasana dia apetraho ny zezika Urea Crusher Makisoa amin'ny toerana iray ao amin'ny atrikasa ary ampifandraiso amin'ny loharano herinaratra hampiasaina. Ny fahamendrehan'ny pulverization dia fehezin'ny elanelana amin'ny roul roa. Ny kely kokoa ny elanelam-potoana, ny fineran'ny fineness ary ny fihenan'ny vokatra. Arakaraka ny maha-tsara kokoa ny fiatraikany pulverization dia ny avo kokoa ny vokatra. Ny fitaovana dia azo noforonina mba ho finday arakaraka ny fitakian'ny mpampiasa, ary ny mpampiasa dia afaka mamindra ny toerana mifanaraka aminy rehefa mampiasa azy, izay tena mety tokoa.
Endri-javatra amin'ny milina Fertilizer Urea Crusher
1. Indrindra ho an'ny fitaovana hamandoana avo lenta, misy fampiharana matanjaka ary tsy mora sakanana, ary milamina ny famoahana fitaovana.
2. Ny fanorotoroana dia mandray fitaovana manokana, ary ny fiainana serivisy dia intelo heny noho ny milina fanosehana hafa.
3. Manana fahombiazana avo lenta izy io; ny fananana am-baravarankely fandinihana dia mahatonga ireo ampahany mitafy hamita fanoloana afaka 10 minitra.
F1: Inona no tombony azo avy amin'ny Masinina mpamaky vovo-jaza Urea?
A1: Fiantohana herintaona, manana androm-piainana maharitra amin'ny fiasan'ny bokikely bokintsika izy io.
F2: Ahoana ny fametrahana lamina amin'ny Urea Compound Fertilizer Crusher?
A2: Azonao atao ny manafatra azy mivantana amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny Fiantohana ara-barotra, hahazo ny kaontinao izahay ary hamaly anao indray mandeha; Aorian'ny hanamafisanao ny milina mety sy hametrahana anay amin'ny alàlan'ny fiantohana ara-barotra dia handamina ara-potoana ny entana izahay.
F3: Manaiky baiko manokana OEM an'ny Urea Compound Fertilizer Crusher ve ianao?
A3: Misy ihany koa ny kaomandy manokana OEM satria manana ny orinasanay manokana izahay, izay mpanamboatra mpitarika amin'ity sehatra ity manana traikefa 20 taona.
F4: Inona ny fotoana tena fandefasana ny orinasa?
A4: 5 hatramin'ny 7 andro ho an'ny vokatra andian-dahatsoratra ankapobeny, mandritra izany fotoana izany, ny vokatra vita amin'ny batch & ny vokatra namboarina dia mila 30 andro ka hatramin'ny 60 andro mifototra amin'ny toe-javatra samihafa.
F5: Ahoana no ahazoanao antoka ny hatsaran'ny Urea Compound Fertilizer Crusher?
A5: Amin'ny ankapobeny, ny fitaovantsika no karazana maharitra indrindra amin'ny mpanjifanay any an-trano na any ivelany. Miaraka amin'ny ekipa fanaraha-maso kalitao efa za-draharaha, manandrana manolotra anao ny vokatra misy kalitao tsara indrindra izahay. Na izany aza, ekentsika fa misy kely ny vokatra mety ho diso na simba noho ny antony samihafa.
F6: Ahoana ny serivisinao aorian'ny fivarotana? simba?
A6: Ao anatin'ny fotoana fiantohana 24 volana, ny serivisy ankapobeny aorian'ny fivarotana dia manova ireo faritra simba, fa raha toa ka azo amboarina amin'ny vidiny kely ny fahasimbana dia miandry ny volan'ny mpanjifa izahay momba ny vidiny fanamboarana ary hamerina izany ampaham-bola izany. (Fanamarihana: tsy misy ampahany amin'ny akanjo.)
Tongasoa eto amin'ny fanontanianao sy ny fitsidihanao ny orinasa!
Fampisehoana horonantsary Urea Crusher Machine
Parameter milina mpamaky vovo-jaza Urea
Distance afovoany (mm)
Famoahana granularity (mm)
Teo aloha: Double-axle Chain Crusher Machine Fertilizer Crusher
Manaraka: Masinina Cage Mill Cage Mill